SAWIRO: Ra’isal Wasaare Khayre oo la kulmay Gudoomiye-yaasha Degmooyinka G/Bakool – War La Helaa Talo La Helaa
SAWIRO: Ra’isal Wasaare Khayre oo la kulmay Gudoomiye-yaasha Degmooyinka G/Bakool
Xasan Cali khayre, Ra’iisal Wasaaraha Somaliya oo uu wehlinayo Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) ayaa kulan la qaatay Maamulada Degmooyinka Xudur, Rabdhuure iyo Tiyeeglow, kaasi oo looga hadlayey xaaladaha ka jira Gobolka Bakool.
Maamulka Degmada Xudur iyo Odayaasha ayaa Madaxda kala hadlay Dardar gelinta hawlaha dib u xuraynta deegaannada hoosyimada Degmada iyo sidii loo tayeyn lahaa Xarumaha Waxbarashada, Caafimaadka,Shaqo Abuurka Dhalinyarada iyo sidii looga Qeyb qaadan lahaa Dib u xureynta Guud ee Gobolka Bakool.
Maamulka iyo Odayaasha Dhaqanka Degmooyinka Rabdhuure iyo Tiyeeglow ayaa sidoo kale Madaxda kala hadashay sidii Degmooyinkaas looga saari lahaa Shabaab oo gacanta ku haya degmnooyinka ay Guddoomiye-yaasha ka yihiin.
Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa ballanqaaday inay wax ka qaban doonan Arrimaha Waxbarashada,Cafimaadka iyo Shaqa la’aanta Jirta,waxaana sidoo kale uu sheegay in Muhiimada Koowaad la siiyo sidii looga Shaqayn lahaa Amniga Gobolka Bakool kan Dowlad ahaan ay wax ka qaban doonaan tayeynta Ciidanka Xoogga Dalka.
HOOS KA FIIRSO: SAWIRADA:
Taliye ku xigeenka Sirdoonka Qadar oo safar qarsoodi ah ku yimid Muqdisho.
FIIRSO: Kheyre oo olole xoogan ka bilaabay maamul goboleedyada